I-Gingerbread House-cosy cottage emaphandleni
Ukuba ufuna ukuthabatha inyathelo emva kwexesha kwaye umke kwindawo yethu exakekileyo yemihla ngemihla le ndlu yangasese yeyona ndawo ifanelekileyo kuwe. Ilungele ukonwabela kwaye ujonge icala elihle lendalo ngaphambi kokuba uchithe iingokuhlwa zokuphumla emlilweni. Thatha ixesha lokuphumla-funda, bhala, uzobe, ucinge okanye uphile nje kwaye uyonwabele inkampani okanye ukhuthale-ukunyuka intaba, ukukhwela ibhayisekile..
I-cottage ifanele ngokwenene abantu abathanda i-cottage yelizwe imvakalelo kunye nomoya okhululekileyo okanye njengesiseko sohambo losuku olunye ukuwela iSlovenija.
Le propathi ihleli kwinduli encinci, kumda wendawo enoxolo, isusiwe kwindawo yokuhlala kwindawo entle yendalo phakathi kweZagorje neRadeče. Indlwana entle ezimeleyo eyakhiwe kwaye ijikelezwe ziinduli, amadlelo kunye namahlathi, ajikeleze intlambo engonakaliswanga yomlambo iSopota. Ibekwe kwindawo enoxolo ekupheleni kwehlathi.
Indawo yokuphumla ingqondo yakho, umphefumlo kunye nomzimba wakho, okanye mhlawumbi isiqalo sotyelelo lwesidiliya, ukukhwela intaba kunye nokukhwela ibhayisekile kwindalo okanye indawo yokubona. Kukuhamba ngokugqibeleleyo ukuba ujonge indawo yeholide apho unokushiya khona uxinzelelo kunye namaxhala emihla ngemihla ngasemva. Kubantu abathanda indalo enyulu.
Ilali iyindawo ekude kakhulu, izithuthi zikawonke-wonke zikhona kodwa ayilunganga kangako. Ukuba ufuna isithuthi ukuya nokubuya endlwini - oko kunokulungiswa. Kungenjalo iyafikeleleka ngemoto. Idolophu enkulu ekufutshane yimoto eyi-10 min yokuqhuba (Zagorje, Radeče).